Ini ndiri muSenses
Chii chinoziva pasina iwo manzwiro ini.
Vol. 5 JULY, 1907. Nha. 4
Isu TINOGARA uye TASTE uye tinzwe uye toona uye tinzwe; isu tinogara mumanzwiro, tinoita nemanzwiro, tinofunga kuburikidza nemanzwiro uye tinowanzozvizivisa pachedu nemanzwiro, asi hazviwanzo kana kuti hatimbopokana nezvepakutanga kwemanzwiro edu, kana kuti vanogaramo vanogara sei mazviri. Isu tinotambura nekunakidzwa, kuyedza uye kushandira kuti tidye uye tigadzikise manzwi; tinofunga uye tinoronga uye tinoshandira kuwana iko kushuva kwedu tisingazive kuti zvishuwo izvi zvese zvine hukama nemanzwiro uye kuti isu tiri vashandi vavo. Isu tinogadzira zvibodzwa zvinovakirwa pane zvinonzwisisika. Idzo pfungwa dzinova zvifananidzo uye isu vanonamata zvifananidzo. Chitendero chedu chinamato chemanzwiro, iwo manzwi edu vamwari. Isu tinogadzira kana kusarudza umwari hwedu zvinoenderana nezvinodzora pfungwa dzedu. Isu tinozvishongedza nehunhu hwepfungwa, uye tinamate zvakaperera kuburikidza nenzira dzekuziva kwedu. Isu tinodzidziswa uye tinorukwa zvinoenderana nehukuru hwedu uye nekuvhenekerwa kwechizvarwa chatiri kurarama mairi; asi tsika nemagariro edu ndezve nechinangwa chekubhadhara mutero nekupembera kuziso redu muhunyanzvi uye hwakaomesesa nzira, uye zvinoenderana nesainzi nzira. Sainzi yedu sainzi yemanzwi. Isu tinoedza kuratidza kuti pfungwa dzinongova maficha anonakidza uye kuti manhamba zviverengero zvakaumbwa kuti zvive nyore kuverenga uye kuti tishandise kuwana izvo zvinozonakidza uye zvinonakidza zvemanzwiro munguva yatinorarama.
Kuruboshwe kumanzwiro isu tinofanirwa kutenderedzwa uye nekuvharirwa mukati neyenyika yemanzwiro edu; isu tinofanirwa kudyisa, kuita, kurarama uye kufa semhuka dziri munyika yemweya yedu. Asi pane "ini" uyo anogara mune zvekunzwa - uyo masosi anovimba nehunyanzvi hwekuda kunzwa-uye kunyangwe pfungwa dziripo vatenzi vake varipo, pachave nezuva iro "ini" ndichamuka kubva mukukanganisa kwake. uye achamuka orasa ngetani dzenjere. Anozopedza nguva yake yeuranda uye otora kodzero yake yeVamwari. Nechiedza chaanovhenekera anozodzima masimba erima uye aparadze kubwinya kwekunzwa izvo zvakapofomadza uye zvakamuita kuti akanganwe nezvekwaakabva. Iye achanyarara, achikunda, achiranga, uye nekukudziridza pfungwa dzemukati muhukuru hwepamusoro uye ivo vanozova vashandi vake vanoda. Ipapo "ini" ndichaita samambo wedenga kutonga nehutongi, rudo nehungwaru pane zvakasikwa zvekunzwa.
“Ini” tichaziva nezve nzvimbo iri mukati nokunze kwemanzwiro, iwo ari huchenjeri hwezvinhu zvese, uye tigova mugovani mukuvapo kusingagoneki uko kuri kweChinhu chimwe muzvinhu zvese-asi icho isu, patakapofumadzwa pfungwa, dzava kutadza kuona.
Mukutanga kwezvinhu zvakasikwa chinhu chimwe chete homogenible chinosiyanisa, uye kuburikidza nehunhu hwacho humwe, huviri, hunoratidzika semweya-chinhu. Kubva uye seyemweya-chinhu chinogadzirwa masimba ese. Saka panobva pavapo chisikwa chisina fomu. Mukati mekumanikidza masimba anogadzira izvo zvinhu semota yavo. Simba rega rega rine mota inoenderana. Ino mota kana chinhu kutaura kwakanyanya kwesimba. Rutivi rwekumashure kwesimba raro, sekungofanana nemweya- nenyaya nenyaya yemweya matanda akatarisana nechinhu icho chaive chinhu. Masimba ese uye zvinhu hazviratidzike panguva yekutanga, asi zvinongoratidza chete uye muchikamu icho mavanoburitsa mamiriro ezvinhu ekuratidzwa. Kune masimba manomwe, ane mota dzinoenderana, zvinhu zvinomwe. Izvi zvinoumba pasi nokudenga uye nekushanduka kwawo. Zodiac inoratidza ichi chinoitika uye shanduko nezviratidzo zvaro zvinomwe kubva kukenza (♋︎) nenzira ye libra (♎︎) kusvika capricorn (♑︎). Mukutanga kwenguva yekutanga (kutenderera) yekuratidzwa, asi simba rimwe rinozvizivisa uye kuburikidza nechero chinhu charo. Ichi chinhu chinotevera chinoshanda senzira yekutaura kwemauto echipiri zvakare nechinhu chayo chechipiri. Munguva imwe neimwe (kutenderera) simba rekuwedzera uye chinhu chinoratidzwa. Chadenga chedu chiripo chakadarika nemwaka nhatu dzakadai uye dzave muchikamu chechina. Miviri yedu ndiyo mhedzisiro yekuunganidzwa kwemasimba uye zvinhu zvawo zvinoratidzwa uye zvava kuratidza. Munguva yechina ndiyo shanduko yekuchinja kubva pachinogadziriswa mukushanduka-shanduka.
Nekusagadziriswa kwezvinhu, miviri inogadzirwa inobata zvinhu uye kuburikidza nayo izvo zvinhu zvinoshanda. Izvo zvinhu zvinobatanidzwa mumuviri uye zvigova pfungwa dzemuviri wakarongeka. Manzwiro edu ndiko kudhirowa pamwe uye kusanganisa kwezvinhu izvo mumuviri mumwe. Pfungwa yega yega yakabatana nechero chikamu chemuviri icho chiri chikamu chayo uye chikamu chaicho kuburikidza neicho pfungwa inoshanda pane inoenderana chinhu uye kuburikidza neicho chinhu chinobata pane pfungwa. Nekudaro zvave zvichisanganisira izvo zvemoto, mweya, mvura uye pasi; uye chechishanu chava kuitwa semvura. Pfungwa dzechitanhatu nerechinomwe dzave kuvepo, uye dzichiri kufanira kuve nekushandurwa kuburikidza nemitezo yavo inoenderana nenzvimbo mukati memuviri. Masimba anoshanda kuburikidza nezvinhu zvemoto, mweya, mvura, pasi uye ether chiedza, magetsi, iro remvura-iro iro risingasisina zita resainzi, maginiti, uye ruzha. Pfungwa dzinoenderana ndidzo: kuona (moto), kunzwa (mweya), kuravira (mvura), kunhuwa (pasi), uye kubata kana kunzwa (ether). Nhengo dzezvinhu izvi mumusoro iziso, nzeve, rurimi, mhino uye ganda kana miromo.
Izvi zvinhu nemauto adzo zvinhu, hazvisi zvechisarudzo kwete-zvinhu. Ivo vanounzwa pamwechete uye vanobatana kuti vagadzire muviri wemunhu pamwe nemweya wayo.
Inenge mhuka yega yega fomu inopihwa nemanzwiro mashanu, asi hapana mune imwechete yakafanana nemurume. Manzwiro ari mumhuka anotongwa uye anodzorwa nezvinhu zvawo zvinoenderana, asi mumurume iyo "ini" inopa kupokana nekutonga kwese nezvinhu. Pfungwa dziri mumhuka dzinoita sedzakanaka kupfuura dziya dzemunhu. Izvi zvinodaro nekuti izvo zvinhu hazvisangane nekupokana kana zvichibata pane mhuka, uye saka mhuka inotungamirwa zvakanyanya nezvazviri. Manzwiro enyama anongoziva zvavo zvinhu zvavo, asi iye "ini" mumunhu anobvunza zvinoitwa nemanzwiro ake apo anoedza kuzvirondedzera kwaari, zvobva zvave pachena kuvhiringidzika. Kuramba kushoma kwo “Ini” kunopa kumanzwiro ayo anozviona kuchinyatsoita zvinhu zvinotungamira manzwi, asi kana izvo zvinongedzo zvichitungamira murume zvakazara kuburikidza nemanzwiro ake haana huchenjeri uye haana mutoro wekuita. Iyo yepedyo nemusikirwo munhu anorarama zvakanyanya nyore iye achabvuma kwaari uye kutungamirirwa neakasikwa kuburikidza nemanzwiro ake. Kunyangwe murume wepakutanga anogona kuona uye kunzwa kure uye kunhuhwirira kwake uye kuravira kwakasimba mumitsetse yezvisikwa, zvakadaro haakwanise kusiyanisa pakati pemavara uye mumvuri wevara, iyo muimbi anoona uye anokoshesa nekutarisa, uye haagoni kusiyanisa mutsauko wematoni nekuwirirana. izvo muimbi anoziva, uye haasati ave nehukasha hwekuravira hwaakakudziridzwa neapuro kana inyanzvi yekuongorora weti, uye haakwanise kuona mutsauko nekuwanda kweanonhuwira uyo munhu anga aranga pfungwa yake yekunhuhwirira.
Munhu arikugadzira pfungwa yechitanhatu iyo isina mhuka. Uhu ndihwo hunhu kana hunhu hwehunhu. Pfungwa yehunhu inotanga kumutsa mune yekutanga murume uye inova chinhu chinonyanya kusimba sezvo murume achivandudza mukubereka uye dzidzo. Chinhu chinoenderana nepfungwa iyi hachigone kunzwisiswa nemunhu kunyangwe chiripo, asi simba raanoshandisa kuburikidza nehunhu nehunhu hunofungwa, uye zvinoitwa kuburikidza nekufunga kuti pane anomuka mukati memanzwiro emunhu "wake" chaiye inova pfungwa yechinomwe, pfungwa yehunyanzvi, yekunzwisisa uye yeruzivo.
Nhoroondo yakapfuura yezvose zvakasikwa, yekubatanidza kwezvinhu zvakasikwa uye yehupenyu hwese hwemhuka, inoitwazve mukuumbwa kwemuviri wemunhu. Iko kushungurudzwa kwezvinhu zvinopera pakuzvarwa uye iko kushanduka kwemanzwiro kunotanga. Iko kukura zvishoma nezvishoma kwemanzwiro ari mumakwikwi apfuura kunogona kudzidza zvakanyanya nekutarisirwa kwemunhu, kubva pakuzvarwa kusvika pakuzadzikiswa chaiko semurume. Asi imwe nzira iri nani uye yakavimbika yekudzidza manzwisisirwo akagadziridzwa ndeyokudzosera kunguva yeucheche hwedu uye tarisa shanduko inoitika zvishoma nezvishoma yemanzwiro edu uye nenzira yataishandisa nawo.
Mucheche chinhu chinoshamisa; pazvisikwa zvipenyu zvese ndizvo zvisingabatsiri. Masimba ese epasi akashevedzwa kuti abatsire mukuumbwa kwemuviri mudiki; zvirokwazvo iAreka yaNoa ”mune iyo miviri miviri yehupenyu uye yechinhu chose. Izvo zvikara, shiri, hove, zvinokambaira, uye mhodzi dzehupenyu hwese dzakabatwa mune izvo zvakasikwa zvakasikwa. Asi kusiyana nechimwe chisikwa chemhuka, mwana anoda kugara achitarisirwa nekudzivirirwa kwemakore mazhinji, sezvo asingakwanise kuzvitsigira kana kuzvibatsira. Icho chisikwa chidiki chakazvarwa munyika pasina kushandisa kwaro pfungwa; asi nehunyanzvi hwekuita kuti zvinzwiwewe pakusvika uye kudiwa kutarisirwa.
Pakuzvarwa mucheche anenge asina chaanonzwa. Iyo haigoni kuona, kana kunzwa, kana kuravira, kana kunhuhwidza, kana kunzwa. Iyo inofanirwa kudzidza kushandiswa kweimwe yeaya manzwi, uye inozviita zvishoma nezvishoma. Vacheche vese havadzidze kushandiswa kwemanzwiro avo muhurongwa hwakafanana. Neimwe kunzwa kunotanga kutanga; nevamwe, kutanga kuona. Kazhinji, zvakadaro, mucheche anongoziva sepamota isingazivikanwe. Imwe neimwe yemanzwiro ayo inovhurika sekunge nekuvhunduka, inogadzirwa nekuona kana kunzwa kekutanga, iyo yakaunzwa naamai vake kana imwe iripo. Zvinhu zvinosvibiswa ziso recheche, uye hapana neimwe nzira inogona kuona chero chinhu. Izwi raamai varo rinongonzwikwa senge kurira kana kumwe kurira kunodakadza nhengo yavo yekunzwa. Izvo hazvigone kusiyanisa kunhuhwirira uye hazvigoni kuravira. Kudya kwakatorwa kunobva mukukurudzirwa kwemasero emuviri, iwo anongori miromo nemudumbu, uye haigone kunzwa nekuita chaiko kana kuwana chero chikamu chemuviri wayo. Pakutanga haigoni kuvhara maoko ayo pachinhu chero chipi zvacho, uye kuyedza kuzvidyisa netsiva. Izvo izvo zvisingaone zvichacherechedzwa nekusakwanisa kutarisa maziso ayo pane chero chinhu chakapihwa. Amai vacho vanofanirwa kuidzidzisa kuti vaone nekunzwa, pavanenge vachidzidzisa kutora chikafu. Nemashoko anodzokororwa uye nemikono anoedza kukwezva kwayo. Nekushivirira amai vacho vanotarisa mumaziso avo anodedera kuti vaone kutaridzika kwekucherechedzwa, uye mavhiki kana mwedzi vachipfuura moyo wavo usati wafadzwa nekunyemwerera kwekuchenjera. Kana ikatanga kuona mutsindo inofamba nemakumbo ayo mudiki nekukurumidza, asi isingakwanise kuwana ruzha. Kazhinji nenzvimbo yeruzha inouya pfungwa yekuona kana chimwe chinhu chinopenya chichiiswa pamberi pemeso kana chinotariswa kune chimwe chinhu. Iye anongwarira anoteedzera akakwirisa chero mucheche haakwanise kutadza kuziva nezvaanoita kana imwe yemanzwiro aya ikashandiswa nemazvo. Kana inzwi rinoshandiswa pakutaura naro rinyoro uye rinofadza richanyemwerera, kana rakatsamwa uye rakatsamwa rinopopota nekutya. Iyo nguva painotanga kuona chinhu inogona kucherechedzwa neinoenderana kutarisa kwekutarisa kunoiswa chinhu. Panguva ino maziso anozoonekwa kuti atarise zvakanaka; pane dzimwe nguva kupfuura kana ichinge yaona maziso ave kunze kutarisa. Tinogona kuyedza mwana kuti angaona here nekunzwa neyimwe yematoyi aanodisisa, mbereko. Kana tikazunza gonhi uye mwana akarinzwa asi asingaone, rinotambanudza maoko ake chero munzira uye rova ​​nechisimba, iyo ingave kana isingave iri munzira yegwara. Izvi zvinoenderana nekukwanisa kwayo kuwana ruzha. Kana ichiona iyo mbereko, ingangotarisa meso ayo kuhuku, uye ndokuisvira. Izvo zvinoita kana kuti zvaisaona zvinoratidzwa nekufambisa iyo tande zvishoma nezvishoma kumaziso uye kuibvisazve. Kana iyo isingaone, maziso anozoisa pachena pakavhurika. Asi kana ichinge yaona ivo vanozoshandura mukutarisa kwavo zvichienderana nepedyo kana chinhambwe kusvika kumucheto.
Kuvira pfungwa inotevera yakagadziriswa. Pakutanga mucheche anotadza kuratidza chaanofarira mvura kana mukaka kana shuga kana chimwewo chikafu chisinganyatso kutsamwisa kana kushungurudza maseru emuviri. Zvinotora zvese chikafu zvakafanana, asi nekufamba kwenguva zvinoratidza kuda kwevamwe pamusoro pevamwe nekuchema iyo kana chikafu chakangoerekana chabviswa. Nekudaro, semuenzaniso, kana chidimbu chekisikiti chakaiswa mumuromo waro chinochema kana pipi yacho ikabviswa uye ikasazorodzwa nipple kana mukaka. Asi kucherechedzwa kwayo kunogona kubviswa kubva mukufunga kwayo kwekuda nekuzunza mbichana kana kutamba chimwe chinhu chakajeka pamberi pemeso ake. Iyo pfungwa yekunhuhwirira inoonekwa neiye anoona nekunhuhwirira, iyo yekutanga iyo ichave inoratidzwa nekunyemwerera, kufemedzeka, kana mwana mucheche.
Kunzwa kunogadzirwa zvishoma nezvishoma uye zvakaenzana nemamwe manzwi. Asi mwana haasati adzidza kukosha kwekuenda kure. Ichasvikira kumwedzi kana davi rinotsvedza remuti paine chivimbo chakawanda seinosvika kumhino dzaamai vayo, kana ndebvu dzababa vake. Kazhinji inochema nekuti haigone kubata mwedzi kana chimwe chinhu chiri kure; asi zvishoma nezvishoma zvinodzidza kukosha kwemakiromita. Izvo hazviite, zvisinei, saka nyore nyore kudzidza kushandiswa kwenhengo dzayo, nekuti ichaedza kuzvidyisa nemakumbo ayo kana makumbo kana chero chidhanzi. Kwete kusvikira makore mazhinji apfuura zvazorega kuedza kuisa zvese mukati mayo mumuromo.
Manzwiro ari muhupenyu hwepakutanga anodzorwa nezvinhu sezvakaita mhuka. Asi muhudiki hwepfungwa idzi pfungwa hadzina kunyatso kukura; nekuti, kunyangwe paine zvigadzirwa zvakasarudzika kumurayiro wekare, iwo manzwi haatangi kushandiswa nehungwaru kusvika pazera rekuyaruka; zvadaro zvinotanga kushandiswa chaiko kwemanzwiro. Ndipo apo ndipo panomira mutsika, pfungwa yehunhu inotanga, uye pfungwa dzese dzinotora chimwe chirevo chimwe panhanho iyi mukukura kwavo.
Sezvo paine masimba anoshanda kuburikidza nemotokari dzawo, izvo zvinhu, saka zvakare zviripo zviga zvakabatana nazvo uye zvinoshanda kuburikidza nemanzwiro uye nhengo dzazvo. Pakutanga chinhu chekutanga chaive moto, simba rekutanga kuratidzwa raive mwenje waibata kuburikidza nemota uye chinhu, moto. Mukutanga kwemunhu Chiedza senge moto mune zvakasikwa ipfungwa, iyo, kunyange pakutanga iri muchimiro chakanyanya, iine mukati mayo hutachiona hwezvinhu zvese zvinofanirwa kugadziridzwa uye zvakare unoisa muganho mukukura kwayo. . Pfungwa yayo ndiko kuona uye nhengo yayo iziso, chinovawo chiratidzo.
Ipapo kunouya mashandiro esimba, iwo magetsi, kuburikidza nechinhu chayo mweya. Mumunhu nheyo inoenderana ndihwo hupenyu (prana), iine pfungwa inoenderana yekunzwa, uye nzeve sechinhu chayo. Simba re "mvura" rinoshanda kuburikidza neayo chinhu mvura, uye ine sekuenderana kwayo musimboti wechimiro (astral muviri kana linga sharira), zvine pfungwa, iyo yekuravira, uye nhengo yayo rurimi.
Simba remagineti rinoshanda kuburikidza neyakagadzika pasi, uye rine zvaro rinoenderana uye pfungwa mune murume, pabonde (muviri muviri, sthula sharira) uye kunhuwa, nemhino sechinhu chayo.
Simba rekurira rinoshanda kuburikidza nemotokari yayo ether. Mune murume nheyo inoenderana ichi chishuwo (kufanana) uye manzwiro ayo ekunzwa, neganda nemiromo semitezo yayo. Idzi pfungwa shanu dzinozivikanwa kumhuka uye nemunhu zvakafanana, asi mukusiyana kwakasiyana.
Pfungwa yechitanhatu ndiyo pfungwa inosiyanisa mhuka kubva kumunhu. Iyo pfungwa inotanga, kungave mumwana kana murume, nepfungwa yeI-am-ness. Mumwana zvinoratidzwa kana mwana ave izvo zvinonzi "kuzviziva." Mwana wechisikigo, semhuka yemusango kana yemusikirwo murume, haana kunyatsogadziriswa mutsika dzayo, uye haatyi uye kuvimba mukuita kwayo. Kana zvichinge zvangozviziva pachazvo, zvakadaro, zvinobva zvarasikirwa nemhinduro yechisikirwo yemanzwiro kune izvo zvekunze zvinhu, uye kunzwa kudzorwa nekunzwa kwayo ini.
Ndichitarisa kumashure kwezvakapfuura mukuru haayeuke kurwadziwa kwakawanda uye mbiya idzo kuvepo kweiye kwandakonzeresa kuti anzwe. Kunyanya kuziva kuti Ini ndiri pachangu, kurwadziwa kwakanyanya kuchave kuchikonzera kune inoyerera sangano. Izvi zvinonyanya kuratidzwa nemukomana kana musikana achingosvika mukuyaruka kwavo. Ipapo pfungwa yechitanhatu, iyo yetsika kana pfungwa yehunhu, inosimbiswa nekuti ini panguva iyoyo ndinoshamisika nemuviri kupfuura zvaraive zvamboita. Iko panguva ino iyo musimboti wepfungwa unoshanda kuburikidza neicho chirevo, pfungwa yehunhu kana hunhu. Mupfungwa iyi hunhu hunongori kuratidza kweI, iyo mask yeI, iyo nhema yenhema. Ini ndiri wega munhu kana hwakatemerwa hwaro hwepfungwa, inoenderana nekutanga kwekuedza kwepfungwa kuratidza pachako kuburikidza nekutanga pfungwa, iko kwekuona, nesimba rinoenderana yechiedza uye chinhu chayo moto.
Pfungwa dzinomiririrwa mudenga. Kana dhayamita rakatorwa kubva kuzviratidzo cancer, (♋︎) kuenda ku capricorn (♑︎), maziso mumusoro ari pamutsetse wakatanhamara mu zodiac iyo inokamura nzvimbo kuita chikamu chepamusoro uye chakaderera. Chikamu chepamusoro zodiac kana musoro ndicho chisina kusarudzika, nepo chikamu chepazasi chezodiac kana musoro ndiko kuratidzwa nekuratidzwa hafu. Mune ino yepasi kuratidzira hafu kune kuvhurika kunomwe, kunoratidza nzvimbo nomwe, asi kubudikidza nepo pari zvino shanu chete pfungwa dzinoshanda.
Nheyo idzi dzakakwidziridzwa naAmai. Blavatsky mune theosophical dzidziso ndeiyo, muviri wenyama (sthula sharira), astral muviri (linga sharira), nheyo yehupenyu (prana), musimboti wechido (kama), pfungwa (manas). Musimboti wepfungwa (manas) uri kuna Amai. Blavatsky akati ndiyo nhungamiro yemunhu, ndiyo yega yeakataurwa nezvake isingaperi, uye musimboti wega unozviratidza mumurume. Nheyo dzakakwirira hadzisati dzave kuratidza, uye saka dzinomiririrwa muhafu yepamusoro ye zodiac; asi nekudaro nheyo yefungwa ndidzo dzinooneswa muchadenga uye munhu, zviratidzo zve zodiac zvinoratidza nzira iyo nheyo iyi inogadzirwa kuburikidza nekubatana nenheyo dzechisimba dzekutungamira, mune zvakasikwa kurongeka kubva panechisoution kusvika pakushanduka. Nekudaro, semuenzaniso, mweya wekutanga wepfungwa, cancer (♋︎), inokanganisa hutachiona hwehupenyu, leo (♌︎), iyo inokura zvishoma nezvishoma ikaita chimiro, virgo (♍︎), uye ndeipi fomu inorongerwa neyavo pabonde nekuzvarwa, libra (♎︎). Bonde rayo rinoratidzwa pamwe nekusimudzirwa kwesimba rechishuvo, scorpio (♏︎). Pano panoperera iye chete mhuka yemuviri. Asi pane zvemukati zvemukati, senge clairvoyance uye clairaudience, inoenderana nekuona nekunzwa. Izvi, nehunyanzvi hwepfungwa, zvine nhengo dzadzo nenzvimbo dzekuita muhafu yepamusoro yemusoro. Pfungwa uye hunyanzvi hwayo hunofanirwa kurangwa uye kugadziridzwa isati yakakwirira mirawu (atma uye buddhi) inogona kushanda.
Munhu anotanga pfungwa yechitanhatu yehunhu pamwe nehunhu iyo inotungamira kana kutungamirwa nemafungiro, sagittary (♐︎). Sezvo pfungwa yacho painenge ichinyatsotsika tsika, uye pfungwa dzichishandiswa mumabasa avo akafanira uye dzichishandiswa kurudyi, pfungwa sehunhu uye kuratidzwa kweiyo ndinouya kunoenderana nekwavo chaiko ini, humwe humwe pfungwa kana pfungwa, uko kuri kupedzisa kwa manzwi nekudana mukuita chiito simba repamusoro repfungwa. Nhengo iyo hunoratidzwa nehunhu uye pairi hunhu hunomira mukati mechikamu ichi chinomiririrwa neiyo yepituitary muviri. Chiumbwa chinomiririra humwe, capricorn (♑︎) ndiyo pineal gland. Sechirume muviri we pituitary unoiswa kumashure nepakati pakati pemeso. Iyo pineal gland iri shure kumashure uye pamusoro pavo. Maziso anomiririra izvi nhengo mbiri idzo dziri shure kwavo.
Manzwiro atinoita uku uchibata kuburikidza nemunhengo kana nhengo mumusoro haisi tsaona, kana mukana - kushanduka kwezvakatipoteredza. Iwo ari maviri ari kugamuchira uye anoshanda masiteshi kubva kune uyo anofunga, murume, anogona kugamuchira kurairo, uye kutonga kana kutungamira masimba uye zvinhu zvechisiko. Uye hazvifungidzirwe kuti zviratidzo zodiac ndiko kudzvinyirira mazita emamwe matenga mumatenga. Mapoka enyeredzi kumatenga zviratidzo sezvakaita mapuraneti edu. Zviratidzo zodiac zvinomiririra makirasi mazhinji akanyanya kana mirairo. Pamusoro wekirasi yega yega kana kurongeka huchenjeri hwakanyanya kutsvenesa kuti uite zvinopfuura kutaurwa nezvedu. Kubva kuhungwaru hwakawanda hukuru kudaro zvishoma nezvishoma vanofamba vachirongeka vachirongedza masimba ese uye zvinhu zvinoumba muviri wemunhu, uye chimwe nechimwe chakadai chine chekuita nemuviri wemunhu sezvakataurwa.
Manzwiro akasarudzika kubva kune chaiwo Ini uye handikwanise kuzvizivikanwa nacho. Sezvo ini pandinosangana nemuviri, pfungwa dzinoregedza, ivo vanoregedza iyo, ivo vanoitora uye vanokanda kubwinya kwehuchenjeri hwakatenderedza pamusoro payo iyo isingakwanise kukunda. Ini handifanirwe kunzwikwa nemanzwiro; haina kurapwa uye haina simba. Sezvo zvichipinda munyika uye zvakabatana nemanzwiro anozvizivisa neamwe kana ese eanzwisiso, nekuti zviri munyika yepanyama yemafomu umo musina chinhu chekuzviyeuchidza nezvayo, uye hazvisi kusvika mushure menguva refu kutambudzika uye nzendo zhinji zvekuti zvinotanga kuzvizivisa seakasiyana nemanzwiro. Asi mukuedza kwayo chaiko kuzvisiyanisa nayo pakutanga kunowedzera kuverengerwa uye kunyengedzwa.
Mukati meyemwana kana yemurume wepakutanga aive nemashandisirwo epamoyo ake, asi neakadaro aisakwanisa kuzviona. Kuburikidza nekudyara nedzidzo iwo manzwi akaunzwa kune yakakwirira danho rekuvandudza. Izvi zvinomiririrwa nemapazi akasiyana siyana ehunyanzvi. Se, semuenzaniso, muvezi anogadzika zvakajeka fomu uye chikamu uye kuumba dongo repurasitiki kana kuveza marble yakasimba kuita mafomu anowedzera runako rwunofunga rwepfungwa dzake. Iyo muvhi ane pfungwa yerudzi anodzidzisa ziso rake kuona uye mafungiro ake ekufunga kutora runako kwete chete muchimiro asi ruvara. Iye anoona mutsauko mumumvuri uye namatoni oruvara asina kumbobvira abata pamuviri, uye murume wekutanga kana mwana anoona chete seyakafanana rwemavara anopesana neimwe tsvina. Kunyangwe murume wedzidzo yakajairika pakutarisa kumeso anoona chete contour, uye anowana iyo yakajairwa kuratidzika kwemavara uye maficha. Kubva pakuongorora padyo iye anoona zvaasinga zive zita chero chero mumvuri woruvara; asi muimbi kwete chete panguva imwe chete anowana maitiro akajairwa eruvara, asi anogona pakuongorora anoona akawanda mimvuri yeruvara paganda iro risingatombofungidzirwa kuve aripo nemunhuwo zvake. Runako rwemamiriro ekunze kana munhu akaurawa nemhizha huru haatendwi nemunhuwo zvake, uye anoonekwa chete semadhezi nemurume wekutanga kana mwana. Mhuka haina kana hanya neeruvara, kana zvimwewo inongofara naro. Mwana kana murume wekutanga anotofanira kudzidziswa kuti abate pfungwa yemumvuri werudzi nemaonero ari mupendi. Pakutanga pendi inoratidzika kunge ingori pasi rakapfava iro rakapfava kana rakasviba mune dzimwe nzvimbo, asi zvishoma nezvishoma pfungwa yacho inokoshesa kumberi uye kumberi nezvinhu nezvinhu nemuchadenga zvichipindira, uye sezvavanodzidza kukoshesa ruvara rwenyika rwunoita senge rwakasiyana nazvo . Mwana kana murume wekutanga anoziva chete ruzha kuburikidza nemanzwiro kana manzwiro aunoita. Ipapo chinosiyanisa pakati pechirevo uye rwiyo rwakareruka. Gare gare inogona kudzidziswa kukoshesa mamwe manzwiro akaoma, asi iye chete muimbi chaiye anogona kusiyanisa nekutenda kusawirirana kubva mukuwirirana munhimbe huru.
Asi kubwinya uko kunobva pakurimwa kwemasungwa kunosunga iye zvakanyanya pedyo nemanzwiro, uye kumuita iye muranda wavo kupfuura pano. Kubva pamuranda wavo anoteerera nekusaziva, anova muranda wavo akatendeka netsika, kunyangwe nedzidzo uye tsika anosvika panguva yekumuka.
Imwe neimwe yemanzwiro mashanu ndeyakakwira kana yakaderera zvichienderana nekushandiswa kunoitwa kwayo nehunhu. Budiriro uye dzidzo zvinowanzo sunga iyo kusvika kumanzwiro chero ini uye kugona kwekufunga kuchisevenzerwa kumigumo yezvinhu uye ini ndakasungirirwa pasi rose uye kune izvo zvinofunga zvisiri izvo kuti zvive zvinhu zvaro. Kupererwa, hurombo, kurwadziwa, kurwara, kusuwa, kunetswa kwemarudzi ese, kukanda musana pamusoro pavo uye nekubva kune avo vanopikisana nawo ayo anokwezva uye kubiridzira iwo Ini. Kana ndasimba simba rinotanga kuita nharo pacharo pacharo. Ipapo zvinokwanisika kuti zvidzidze zvinoreva uye nekushandiswa chaiko kwemanzwiro. Izvo zvinobva zvadzidza kuti hazvisi zvenyika ino, kuti mutumwa ane chinangwa munyika ino. Kuti iyo isati yapa kwayo kuudza uye kuita basa rayo inofanira kuzivana nemanzwiro sezvavari chaizvo, uye vashandise sezvaanofanira kushandiswa panzvimbo pekunyengedzwa uye kudzorwa navo.
Ini Ini ndinodzidza kuti iwo manzwi ndiwo chaiwo anodudzira zvakasikwa pazviri, ini, uye nekudaro anofanira kupihwa vateereri, asi kuti ini ndinofanira kudzidza mutauro wavo wekududzira, uye ndivashandise saizvozvo. Panzvimbo pekunyengedzwa nehunhu hwavo, ini ini ndinodzidza kuti nekungwara kwekunzwa chete ndiko kugona kududzira zvakasikwa kubudikidza navo, uye kuti nekugona kwavo, ini, ini, ndiri kuita basa nekupa fomu kune vasina kudzidza nekubatsira pane zvinhu muzvishandiso nemamiriro ekushanduka-shanduka. Ini ini ipapo tichiri kudzidza kuti kumashure uye pamusoro pezvinhu izvo zvaari kutaura kuburikidza nemanzwiro ake kune huchenjeri uye hutungamiriri hwaanogona kutaura naye kuburikidza hutsva uye husina kushandiswa hunhu hunovapo uye hunowanikwa nekushandisa chaiko uye kutonga kwomuviri wake. pfungwa. Sezvo masimba epamusoro (sekufunga uye kusarudzika) anokudziridzwa anotora nzvimbo yemanzwiro emuviri.
Asi ndoita sei kuti ndizive ini uye ndizivewo pachangu? Maitiro anoitwa izvi anogona kungo taurwa, asi kune vazhinji zvinogona kuve zvakaoma kuzviita. Maitiro acho ipfungwa yekuita uye ndiyo nzira yekubvisa. Izvo zvinogona kunge zvisingaitwe kamwechete, asi zvakadaro zvinokwanisika kana kuedza kuri kuenderera.
Rega iye amene angabudirira mukubvisa pfungwa dzisipo agare akanyarara ovhara maziso ake. Pakarepo panomhanya mupfungwa dzake pfungwa dzezvinhu zvese zvine hukama nemanzwiro. Rega angotanga kubviswa kweimwe yeidzi pfungwa, taura izvo zvekunhuhwirira. Wobva wamurega achigura pfungwa yekuravira, kuti arege kuziva chero chaanogona kunhuwa kana kuravira. Ngaaenderere mberi nekubvisa pfungwa yekuona, ndiko kuti haazive mukufunga nechero chinhu chechinhu chiri muchimiro kana ruvara. Iye ngaarambe achibvisa pfungwa yekunzwa, kuti arege kuziva chero ruzha kana ruzha, kunyangwe kurira kunzeve munzeve, kana kutenderera kweropa kuburikidza nemuviri wake. Rega iye arambe achienderera mberi nekubvisa pfungwa dzese dzekunzwa kuti asazive muviri wake. Ichachererwa iko zvino kuti hapana mwenje kana ruvara uye kuti hapana chero chinhu muchadenga chingaonekwa, kuti pfungwa yekuravira yakarasika, pfungwa yekunhuhwirira yakarasika, kuti hapana chinhu muchadenga chinganzwike, uye kuti pane hapana pfungwa yekunzwa chero.
Zvichataurwa kuti uyo kubva kwaari pfungwa dzekuona, dzekunzwa, dzekunhuhwirira, dzekunhuwa uye dzekunzwa dzakabviswa haasipo, kuti akafa. Ichi ichokwadi. Munguva iyoyo akafa, uye haasisipo, asi panzvimbo yekwakareba iye ave Iye, uye panzvimbo pekuve nehupenyu hwepfungwa, ISI.
Icho chinoramba chakaziva mushure mekunge pfungwa dzabviswa ndeyangu .. Munguva pfupi iyoyo yenguva murume yakavhenekerwa muConccious. Iye ane ruzivo nezve iye seni, akasiyana nemanzwiro. Izvi hazvisi kugara kwenguva refu. Iye achave zvakare anoziva nezvepfungwa, mune pfungwa, kuburikidza nemanzwiro, asi achavaziva pane zvavari, uye anotakura ndangariro yehunhu hwake chaihwo naye. Iye anogona ipapo kushandira pamwe uye kuburikidza nemanzwiro akananga kunguva iyo yaachange asisiri muranda wavo, asi achazove iye amene nguva dzose, achizogara ari muukama hwakaringana nemanzwiro.
Mumwe anotya rufu uye maitiro ekufa haafanire kuita tsika iyi. Iye anofanira kudzidza zvimwe chimiro chorufu uye chemaitiro ake epfungwa asati aenda kunotsvaga ini.